Category: Local News | Sagal Radio Services
« prev 1 … 877 878 879 880 881 … 884 next »
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 30, 2012
Warka Radio Sagal, toddobaadkan waxa uu idin kaga imaanaya Studiyaha Radio Sagal ee magaalada Nairobi, dalka Kenya.
Sagal Radio Services • News Report • September 29, 2012
The situation of journalists in Somalia is becoming increasingly precarious as the country struggles to put behind it years of lawlessness following the recent successful election of a new president.
Wasaaradda difaaca Soomaaliya oo ka hadashay qabsashada Kismayo
Raysal wasaare ku xigeenka ahna wasiirka gaashaandhiga Md. Xuseen Carab Ciise, ayaa hambalyo iyo bogaadin u direy ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM, guushii ay ka gaareen dagaalkii Kismaayo.
Dhageystayaal warka iyo barnaamijkii dhacdooyina toddobaadkii tagay ee Soomaaliya, waxaa uu idin kaga imaanaya Studia-ha Sagal Radio ee Nairobi Kenya. Qodobo xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan.
Warkii ugu dambeeyay ee Kismayo
Sagal Radio Services • News Report • September 28, 2012
Wararkii ugu dambeeyay ee caawa Kismaayo laga helaayo, ayaa sheegaya in dhinacyadii ku dagaallamay deegaanno u dhow dhow magaalada ay wali isku hor fadhiyaan, halkii ay ku dagaallameen, iyadoo ciidamadii Kenyanka iyo kuwii dowladda Soomaaliya ahaana ay heystaan oo qabsadeen deegaanka Ceel-dhiig oo ay saaka aroortii soo gaareen.
Wariye lagu gowracay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • September 27, 2012
Kooxda al-Shabaab, ayaa maanta degmada Heliwaa ku gowracday wariye ka tirsanaa wariyayaasha fadhigooda uu yahay magaalada Muqdisho, xilli wariyahaasi la sheegay in uu booqasho degmadaasi ugu tagay qaar ka mid ah eheladiisa oo halkaasi deganaa.
Dhismaha xarrunta agoomaha gobalka Togdheer oo lacag loogu deeqay
Lacag ay iska soo aruriyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa la guddoonsiiyay madaxda maamulka gobalka Togdheer, si loogu taageero dhisme xarun agoonta lagu xanaaneyn doono oo Burco laga her-galinaayo.
Madaxweynaha Masar oo ku baaqay in dowladda Soomaaliya la taageero
Madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi, ayaa ugu baaqay dowladaha ku jira golaha guud ee QM inay taageeraan dowladda cusub ee dalka Soomaaliya, si looga guuleysto kooxaha doonaya inay fashiliyaan dadaalka miro dhalay ee Soomaaliya.
Nabad sugidda oo soo bandhigtay caruur miino dhigeysay (Daawo sawirada)
Sagal Radio Services • News Report • September 26, 2012
Hay’adda nadad sugida qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigtay sedex ruux iyo miinoyin xili ay doonayeen in ay ku aasaan xaafad katirsan degmada Yaaqshiid kadib howlgal ay ka sameeyeen halkaasi.
Itoobiyaan rayid ku dilay Baladweyne
Ciidamada Itoobiya ee magaalada Baladweyne jooga, ayaa saaka laba ruux oo rayid ah ku dilay gudaha magaalada Baladweyne, ka dib markii lagu weeraray wax loo maleynaayay inay bam gacmed ahaayeen ciidamadaasi.